February 2018 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
အားလပ်ရက်တွေကို ပင်လယ်မှာကုန်ဆုံးကြမယ် နွေဝင်လာပြီ….နွေရာသီအားလပ်ရက်တွေနီးလာပြီဆိုတာနဲ့… အတော်များများရဲ့အတွေးထဲဝင်လာတာကတော့ ကမ်းခြေမှာ အပန်းဖြေဖို့ပါ။ သွားလာစရာနေရာဒေသတွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကမှ ဘာကြောင့် အပန်းဖြေဖို့ ကမ်းခြေကိုရွေးချယ်ကြသလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။ အကြောင်းရင်းကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းက ပင်လယ်ကမ်းခြေရဲ့ ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးလေးတွေကို လက်တွေ့သိရှိခဲ့ကြလို့ပေါ့…. (၁)ပင်လယ်ရေဟာ အသားအရည်ကို ကျန်းမာစေတယ်။ ဆားဓာတ်ပါတဲ့ ပင်လယ်ရည်ဟာ သင်ဈေးကြီးပေးဝယ်နေရတဲ့…
ဒါတွေပါမှ ကမ်းခြေသွားပါ ပင်လယ်ကမ်းခြေကိုသွားမယ်…အသားမမဲဘဲလည်း အိမ်ပြန်ရောက်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေယူသွားဖို့ မမေ့ပါနဲ့ – – ရှားစောင်းလက်ပတ် gel (အသားအရေကို အစိုဓာတ်ထိန်းပေးမယ့် အကောင်းဆုံးအရာ တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ပါအောင်ယူသွားပါ။) – SPF များများပါတဲ့ နေရောင်ကာခရင်မ် Sun Screen (…
Health Supplement For Under One Year Old Children
တစ်နှစ်အောက်မှာ တိုက်ကျွေးနိုင်ရာ ဆေးအစာ သတ္တုဓာတ်၊ သက်စောင့်ဓာတ် တွေပါတဲ့ အားဆေးတွေဟာ ကလေးတိုင်းကို တိုက်ကျွေးစရာမလိုပါဘူး။ အထူးသဖြင့် မွေးပြီး တစ်နှစ်အတွင်း ကလေးတစ်ယောက်အတွက်တော့ -အမေကလည်း အာဟာရပြည့်ပြည့်ဝဝစားသုံးမယ်၊ -ကလေးကလည်း နို့ကောင်းကောင်းစို့နိုင်တယ်၊ -မွေးရာပါ ရောဂါ၊ ကူးစက်ရောဂါမရှိဘဲ ကျန်းမာတဲ့ ကလေးဖြစ်တယ်…
မီးတွင်းလူနာများ၌ သိုင်းရွိုက်အကျိတ် ယောင်ခြင်း မီးတွင်းမိခင်များ၏ ၁၀ မှ ၁၅ ရာနှုန်းသည် မီးဖွားပြီး တစ်လအတွင်းတွင် စိတ်ကျရောဂါ ရတတ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ယခင်က စိတ်ကျရောဂါ အခံရှိသူများတွင် ပိုမို အဖြစ်များသည်။ သို့သော် တကယ် စိတ်ကျရောဂါမှ ဟုတ်ရဲ့လား?…
မမျိုးဥအိမ်မှာ ရေအိပ်တည်တိုင်း ခွဲရမှာလား? ဒီဘက်နှစ်ပိုငိးတွေမှာအမျိုးသမီးတော်တော်များများ ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးရင်းဖြစ်စေ၊ လက္ခဏာပြလို့ဖြစ်စေ မျိုးဥအိမ်ရေအိပ်တည်ခြင်း ပြသနာအတွေ့များလာပါတယ်။ မမျိုးဥ အိမ်ဟာ ပုံမှန် ရာသီလာတာနဲ့ မျိုးဥ နှစ်လုံးလစဉ်ကြွေပြီး ကိုယ်ဝန်ရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီမမျိုးဥအိမ်မှာ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ အရည်ကြည်လေးတွေ မျိုးဥ အိမ်သို့ အပေါ်မှာ…
Difficult Bath Time
ခက်ခဲသောရေချိုးချိန်များ “ရေမချိုးချင်ဘူး…ရေမချိုးဘူး….ဗြဲ! ” “နင်ရေမချိုးတာ ဘယ်နရက်ရှိနေပြီလဲ? ရုပ်က ကြောင်ချီးရုပ်ဖြစ် နေပြီ!!!လာအခု…ဒီနေ့တော့ ရေချိုးကိုချိုးရမယ်…. မချိုးလို့မရဘူး!” ဒီအချိန်ဆို ဒီအသံတွေကြားနေကျ…. အမနဲ့ သူ့သား ညနေစောင်းရေချိုးချိန်ဆို နပန်းသတ်ရပြီလေ… ဟုတ်ပါတယ်…ဒီလို လေးငါးခြောက်နှစ်အရွယ်ကလေးတွေက ရေချိုးသိပ်ကြောက်ကြတာ… အမေဖြစ်သူတွေကလည်း ကိုယ့်သားသမီးကို သနပ်ခါးအဖွေးသားနဲ့…
သွားပိုးချတာ ပိုးတွေကျလာသတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်ထိ လမ်းဆုံ လမ်းခွ မြို့ထဲတွေမှာ သွားပိုးချသည် ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေနဲ့ လမ်းဘေးကဆိုင်တွေ…. ကလေးတွေကို သွားတိုက်ခိုင်းလို့ သွားမတိုက်ရင် ပိုးကောင်တွေက သွားတွေကို ကိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အပြောတွေ…. တကယ်ရော ပါးစပ်ထဲက ပိုးတွေက သွားတွေကို ကိုက်နိုင်ပါသလားး…
နေရာလွဲမှား သန္တေတည်ခြင်းများ ပုံမှန်သဘာဝသန္တေတည်ခြင်း( ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်း) တွင် အမျိုးသားသုတ်ပိုးအမျိုးသမီး မျိုးဥ နဲ့ပေါင်း၍ သန္တေအောင်လာသော မျိုးဥ( Fertilized Egg) ဟာ မမျိုးဥ တည်နေရာမှ သားအိမ်လက်တံ ( Fallopian tube) တောက်လျှောက်ဆင်းလာကာ သားအိမ်အတွင်းသားနံရံတွင် အချင်းတွယ်ကပ်လေ့ရှိပါတယ်။…
How To Repair Your Skin After Going To Beach
နွေရာသီ Beach မသွားရဲဘူးဆိုတဲ့ မိန်းကလေးများအတွက် Beach သွားတယ်ဆိုတာ ပျော်စရာကြီးပါ။ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒါရဲ့နောက်ကွယ်မှာ နေပူတယ်၊ အသားမဲမှာကြောက်တယ်။ အသားရေပျက်စီးမှာကြောက်တယ်ဆိုပြီးမိန်းက လေးတော်တော်များများကြောက်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ့အတွက် Beach သွားပြီးကောင်းကောင်းပျော်ပါ။ ပြန်လာရင်အသားအရေပြန်ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ့် အချက်လေးတွေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁) မဖြစ်ခင်ကြိုတင်ကာကွယ်ဆိုသလို ကမ်းခြေရောက်နေစဉ်အပြင်ထွက်မယ့်အချိန် တိုင်း SPF…